तपाईं सार्है दुब्लो हुनुहुन्छ ? कसरी बढाउने तौल ? यस्तो छ सजिलो काइदा - नेपाली खोज
तपाईं सार्है दुब्लो हुनुहुन्छ ? कसरी बढाउने तौल ? यस्तो छ सजिलो काइदा
काठमाडौँ । ‘ठूलो हावा आयो भने त उडाउला’, ‘ज्यानै यस्तो छ यसले के गरिखाला’ दुब्लो भएकै कारण के तपाईंमाथि यस्ता वाक्य भनिएका छन् ? एकातिर विश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस वजन घटाउन प्रयास गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर २० प्रतिशत दुब्लोपनाका कारण चिन्तित छन् । विवाहअघि अत्यन्त दुब्लो भएको गुनासो पनि महिलाहरू गर्छन् ।
यस्तो समयमा के खाने ? थोरै वजन बढाउन के गर्ने ? जीवनशैलीमा सामान्य परिवर्तन ल्याउँदा मोटाउने चाहना पूरा पनि हुन्छ :
बिहान योग गर्नुहोस् । सामान्य शारीरिक अभ्यास पनि गर्नुहोस् । यसले भोक बढाउँछ । ‘एक्सरसाइज’को विकल्प ‘मर्निङवाक’ पनि हुन सक्छ । स्वच्छ हावाले ‘मेटाबोलिज्म’ बढाउँछ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । ‘ब्रेकफास्ट’मा दूध, दही, घिउको बढी प्रयोग गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई स्वस्थ मात्र राख्दैन, वजन बढाउन पनि सहयोग गर्छ । खानामा दाल, माछामासु, अन्डालगायतका प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुहोस् ।
राति किसमिस भिजाएर सुत्नुहोस् । बिहान सबेरै त्यो भिजाइएको किसमिस खानुहोस् । दुई/तीन महिनामा तपाईंको वजन बढ्छ । केरालाई सम्पूर्ण आहार मानिन्छ । दैनिक तीन–चारवटा केरा खाँदा वजन बढ्छ । तरकारीमा वा खानामा आलुको मात्रा पनि बढाउनुहोस् । यसबाट प्रशस्त कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ । यसले अत्यन्त छिटो वजन बढाउन सहयोग गर्छ ।
केही दिनसम्म नरिवलको तेलमा पकाइएका खानेकुरालाई महत्त्व दिनुहोस् । नरिवलको तेलले दुब्लोपनाको समस्या हटाउन सहयोग गर्छ । दुग्ध ‘प्रोडक्ट्स’ दही, पनिरमा ‘फ्याट्टी एसिड’मात्र होइन, अत्यन्त राम्रो मात्रामा क्यालोरी पनि पाइन्छ । फरक–फरक तरिकामा यी खाद्यान्नको धेरैजसो प्रयोग गर्नुहोस् । शरीरको तौल बढाउन चिया, कफी, रक्सी, सिगरेटजस्ता अम्मलबाट पनि टाढा रहन जरुरी छ । निद्राले शरीरको तौल बढाउन अत्यन्त ठूलो भूमिका खेल्छ । दैनिक सात/आठ घन्टा मीठो निद्रा सुत्नुहोस् ।
चिन्ता लिन छाड्नुहोस् । खजुर वा छोकडालाई दूधमा उमाल्नुहोस् । राति सुत्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग चबाएर खानुहोस् । दूध पिउनुहोस् । दुई/तीन महिनामा नै तपाईंको समस्या समाधान हुन्छ । कब्जियत, अपच तथा अन्य समस्या छन् भने चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस् । कहिलेकाहीँ यस्ता रोगका कारण पनि वजन कम भइरहेको हुन सक्छ ।
कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्थलको टुङ्गो लागेन
चितवनमा खोलाले बगाएर १२ वर्षीया सम्झनाको मृत्यु